Tụ tụ Isi Ego na United States na Gburugburu factorywa ụlọ ọrụ na ndị nrụpụta | NTOKWU
Ka vaping na-eto eto na ewu ewu, ọ na-abụ ebumnuche ebumpụta ụwa maka gọọmentị nwere mkpa ụtụ isi. Ebe ọ bụ na ndị na-ese anwụrụ na ndị na-a smoụbu sịga na-azụkarị ngwaahịa alụlụ, ndị isi ụtụ isi na-eche n'ụzọ ziri ezi na ego ejiri anwụrụ sịga bụ ego anaghị etinye aka na akwụkwọ ụtaba ọdịnala. Gọọmentị adaberewo na sịga na ụtaba ndị ọzọ dị ka isi iyi nke ego ruo ọtụtụ iri afọ.
Ma ngwaọrụ ndị na-agbapụta mmiri na mmiri ele mmiri kwesịrị ịtụ ụtụ dị ka ụtaba fọrọ nke nta ka ọ bụrụ isi. Ndị gọọmentị na-ahụ ka ha na-eme ka ndị na-ese anwụrụ ọkụ kwụsị ị tobaccoụ sịga, ha ghọtara na ego ha furu efu ga-emerịrị. Ebe ọ bụ na ịmịpụ dị ka ise anwụrụ, enwerekwa nnukwu nsogbu ahụike ọha na eze na ịsepụsị, ọ na-abụ ihe mara mma maka ndị ndọrọndọrọ ọchịchị, ọkachasị n'ihi na ha nwere ike ịkọwa ụtụ isi na ọtụtụ azịza ahụike na-enyo enyo.
A na-atụpụta ụtụ isi Vape ugbu a ma na-agafe mgbe niile na United States na ebe ndị ọzọ. Ndị na-akwado ụtụ isi na-abụkarị ndị na-akwado ụtụ mbelata ụtaba na ndị nnọchi anya nke ndị na-azụ ahịa ụlọ ọrụ na ndị na-ere ahịa na-akwụ ụgwọ, ndị otu na-achịkwa ụtaba na-akwado ha dịka ngụgụ na mkpakọrịta obi.
Gịnị kpatara gọọmentị ji atụ ụtụ ngwaahịa na-akwụ ụgwọ?
A na-etinye ụtụ isi na ngwaahịa ụfọdụ - nke a na-akpọkarị excise tax maka ebumnuche dị iche iche: iji kpata ego maka ndị na-atụ ụtụ isi, ịgbanwe omume nke ndị a na-atụ ụtụ, yana iji belata ụgwọ gburugburu, ọgwụ, na akụrụngwa nke iji ngwaahịa mepụtara. Ihe atụ gụnyere ịtụ ụtụ mmanya na-aba n'anya iji kwụsị ị excessiveụbiga mmanya oke, na ịtụ ụtụ mmanụ ụgbọala iji kwụọ ụgwọ maka idozi ụzọ.
Productstaba na-abụ ihe a na-atụkarị ụtụ isi. Ebe ọ bụ na nsogbu ị ofụ sịga na-akwụ ụgwọ maka ọha mmadụ niile (nlekọta ahụike maka ndị na-ese anwụrụ), ndị na-akwado ụtụ isi ụtaba kwuru na ndị na-a tobaccoụ sịga ga-akwụ ụgwọ ahụ. Mgbe ụfọdụ a na-akpọ ụtụ isi na-aba n'anya na mmanya ma ọ bụ na ụtaba ụtụ mmehie, n'ihi na ha na-atakwa ahụhụ omume nke ndị a ofụrụma na ndị na-ese anwụrụ ọkụ — na echiche na-enye aka mee ka ndị mmehie kwenye ịhapụ ụzọ ndụ ọjọọ ha.
Mana n'ihi na gọọmentị na-adabere na ego ha ga enweta, ọ bụrụ na ị smokingụ sịga belata enwere ụkọ ego nke ga-ejikọrịrị ụzọ ọzọ a na-enweta, ma ọ bụghị na gọọmentị ga-ebelata mmefu. Maka ọtụtụ gọọmentị, ụtụ isi sịga bụ nnukwu ego na-enweta ego, yana ebubo excise na mgbakwunye na ụtụ azụmaahịa ọkọlọtọ enyocha na ngwaahịa niile erere.
Ọ bụrụ na ngwaahịa ọhụrụ na-ese siga, ọtụtụ ndị na-eme iwu na-achọ ịkwụ ụtụ ngwaahịa ọhụrụ ka ha wee nweta ego furu efu. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ngwaahịa ọhụrụ (ka anyị kpọọ ya sị sịga) nwere ike belata nsogbu ị byụ sịga na ụgwọ ọrụ ahụike metụtara? Nke ahụ na-eme ka ndị omebe iwu nọrọ n'ụdị nsogbu — opekata mpe ndị na-enye nsogbu ịmụ ya.
Ọtụtụ mgbe ndị na-eme iwu obodo na-ada n'etiti ịkwado azụmaahịa mpaghara dịka ụlọ ahịa vape (ndị na-achọghị ụtụ isi) na ndị na-eme mkpọtụ maka ndị otu a na-akwanyere ùgwù dịka American Cancer Society na American Lung Association (nke na-akwado ụtụ isi na ngwaahịa vapo). Mgbe ụfọdụ, ihe na-ekpebi ihe bụ ihe ọmụma na-ezighi ezi banyere nsogbu ndị a sịrị na ha bụ vap. Ma mgbe ụfọdụ, ọ bụ ego ka ha chọrọ n'ezie.
Olee otu vape tax na aru oru? Hà bụ otu ihe ahụ n’ebe niile?
Imirikiti ndị ahịa US na-akwụ ụtụ isi ire ere steeti na ngwaahịa ha na-azụta, yabụ gọọmentị steeti (na mgbe ụfọdụ mpaghara) na-erite uru site na vape ahịa tupu agbakwunye ụtụ isi. A na-enyocha ụtụ isi ire ahịa dị ka pasent nke ọnụahịa mkpọsa nke ngwaahịa a zụrụ. N’ọtụtụ mba ndị ọzọ, ndị na-azụ ahịa na-akwụ “ụtụ isi agbakwunyere” (VAT) nke na-arụ ọrụ otu ọrụ dịka ụtụ isi maka ire ahịa. Banyere ụtụ isi, ha bịara n'ụdị dị iche iche:
Taxtụ ahịa ere ahịa na mmiri mmiri - Enwere ike ịtụle nke a naanị na mmiri nwere nikotin (yabụ ọ bụ ụtụ isi nicotine), ma ọ bụ na mmiri mmiri niile. Ebe ọ bụ na a na-enyocha ya kwa millilita, ụdị ụtụ isi mmiri a na-emetụta ndị na-ere mmiri mmiri karama karịa ka ọ na-ere ndị ahịa ngwaahịa emechara nwere ntakịrị mmiri e-mmiri (dị ka pap vapes na cigalikes). Dịka ọmụmaatụ, ndị na-azụ ahịa JUUL ga-akwụ ụtụ isi na 0.7 mL nke e-mmiri maka ihe ọ bụla (ma ọ bụ naanị 3 mL's kwa mkpọ pọd). Ebe ọ bụ na ngwaahịa ndị na-emepụta ụtaba na ngwaahịa ndị na-akụpụta anwụrụ bụcha obere ngwaọrụ ma ọ bụ sịga, ndị na-ahụ maka ụtaba na-achọkarị ụtụ isi kwa-mililita
Taxtụ isi ego - ofdị ụtụ e-sịga na-akwụ ụgwọ site n'aka onye na-ere ahịa (onye nkesa) ma ọ bụ onye na-ere ahịa na steeti, mana a na-enyefe onye na-eri ya ego n'ụdị dị elu. Ofdị ụtụ isi a na-enyocha ọnụ ahịa ngwaahịa a na-ebo onye na-ere ahịa ebubo mgbe ọ na-azụ ihe n'aka onye na-ere ahịa. Ọtụtụ mgbe steeti na-ewepụta vapap dị ka ngwaahịa ụtaba (ma ọ bụ "ngwaahịa ụtaba ndị ọzọ," nke gunyere ụtaba na-enweghị anwụrụ ọkụ) maka ebumnuche nke ịtụ ụtụ isi. Enwere ike ịtụ ụtụ ụtụ ahịa naanị na ngwaahịa nwere nicotine, ma ọ bụ ọ nwere ike itinye ya na mmiri mmiri niile, ma ọ bụ ngwaahịa niile gụnyere ngwaọrụ ndị na-enweghị mmiri mmiri. Ihe atụ gụnyere California na Pennsylvania taxtụ ụtụ vape California bụ ụtụ ụtụ ahịa nke steeti na-ahazi kwa afọ ma hara nha ọnụego ụtụ niile nke sịga. Ọ metụtara naanị ngwaahịa nwere nicotine. Ebube Pennsylvania vape nke etinyere na ngwaahịa niile, gụnyere ngwaọrụ yana ngwa ndị anaghị etinye mmiri mmiri ma ọ bụ nicotine, mana ụlọ ikpe kpebiri na 2018 na steeti enweghị ike ịnakọta ụtụ na ngwaọrụ ndị na-enweghị nicotine.
Mgbe ụfọdụ, ụtụ isi ndị a na-esonyere “ụtụ ala,” nke na-enye steeti ohere ịnakọta ụtụ isi na ngwaahịa niile ụlọ ahịa ma ọ bụ ndị na-ere ahịa n’ahịa nwere n’ụbọchị ụtụ ahụ malitere ịrụ ọrụ. Dịka, onye na-ere ahịa na-eme ngwongwo n'ụbọchị ahụ ma dee ego na steeti maka ego zuru ezu. Y'oburu na ulo ahia Pennsylvania nwere ahia ahia ruru $ 50,000 nke ahia na aka, onye nwe ya gha aghaghi ikwụ ego nke $ 20,000 ozugbo. Maka obere azụmaahịa na-enweghị nnukwu ego n'aka, ụtụ isi n'onwe ya nwere ike ịdị egwu ndụ. Vatụ PA vape chụpụrụ ihe karịrị ụlọ ahịa 100 vape na azụmaahịa ya n'afọ mbụ ya.
Tụ ụtụ isi na United States
Enweghị ụtụ isi gọọmentị na ngwaahịa ngwaahịa. E gosiputara ego na Congress iji kwụọ ụgwọ ụtụ isi, mana ọ nweghị onye gara nhoputa aka nke thelọ zuru oke ma ọ bụ Senate.
US State, ókèala, na ụtụ isi mpaghara
Tupu 2019, steeti itoolu na District nke Columbia na-akwụ ụgwọ ngwaahịa vaping. Ọnụ ọgụgụ ahụ karịrị okpukpu abụọ n'ime ọnwa asaa mbụ nke 2019, mgbe ụjọ omume na JUUL na vaping nke ndị ntorobịa nke jidere akụkọ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kwa ụbọchị ruo ihe karịrị otu afọ mere ka ndị omebe iwu mee ihe iji "kwụsị ọrịa ahụ."
Ka ọ dị ugbu a, ọkara nke steeti US nwere ụdị ụtụ ngwaahịa na steeti niile. Ọzọkwa, obodo na ógbè ụfọdụ na steeti ụfọdụ nwere ụtụ vape nke ha, dị ka District nke Columbia na Puerto Rico.
Ọ bụ ezie na Alaska enweghị ụtụ isi obodo, ụfọdụ mpaghara mpaghara nwere ụtụ vape nke ha:
Juneau Borough, NW Arctic Borough na Petersburg nwere ụtụ 45% zuru oke na ngwaahịa ndị nicotine nwere
Matanuska-Susitna Borough nwere ụtụ ụtụ 55%
Taxtụ ụtụ California na "ngwaahịa ụtaba ndị ọzọ" na-esetịpụrụ kwa afọ site na Ọchịchị nke Equalization. O gosipụtara pacenti ụtụ isi niile a na-ese sịga. Na mbụ nke a ruru 27% nke ọnụ ahịa ahịa ahịa, mana mgbe Proposition 56 mụbara ụtụ na sịga site na $ 0.87 na $ 2.87 otu mkpọ, ụtụ vape mụbara n'ụzọ siri ike. Maka afọ malite na July 1, 2020, ụtụ bụ 56.93% nke ọnụ ahịa ego maka ngwaahịa niile nwere nikotin
Steeti nwere ụtụ isi abụọ, na-enyocha $ 0.40 kwa millilita na e-mmiri mmiri na ngwaahịa ndị mechiri emechi (pọd, cartridges, cigalikes) na 10% N'ogbe na ngwaahịa sistemụ, gụnyere e-mmiri mmiri na ngwaọrụ
Ego $ 0.05 kwa millilita na e-mmiri nwere nicotine
District nke Columbia
Isi obodo ahụ weere vap dị ka "ngwaahịa ụtaba ndị ọzọ," ma na-enyocha ụtụ isi maka ọnụ ahịa ahịa na-adabere na ọnụego nke edepụtara maka ọnụahịa siga. Maka afọ ụlọnga nke ugbu a, na-agwụ na Septemba 2020, a na-atụ ụtụ isi na 91% nke ọnụ ahịa ahịa maka ngwaọrụ yana e-mmiri nwere nicotine
A $ 0.05 kwa millilita ụtụ na e-mmiri mmiri na ngwaahịa ndị mechiri emechi (pọd, cartridges, cigalikes), na ụtụ isi 7% na-emeghe na sistemụ oghere na e-mmiri mmiri ga-amalite na Jenụwarị 1, 2021
Taxtụ ụtụ ahịa 15% na ngwaahịa niile. Na mgbakwunye na steeti steeti ụtụ isi, ma Cook County na obodo Chicago (nke dị na Cook County) nwere onwe ha vape ụtụ isi:
Chicago na-enyocha otu $ 0.80 kwa kalama ụtụ isi na mmiri ọgwụ nke nicotine yana $ 0,55 kwa millilita. (Chicago vapers ga-akwụkwa $ 0.20 kwa mL Cook County ụtụ isi.) N'ihi ụtụ gabigara ókè, ọtụtụ ụlọ ahịa vape dị na Chicago na-ere e-mmiri nicotine efu na N'onwe Gị nke nicotine iji zere nnukwu ụtụ-mL na nnukwu karama
Countytụ isi Cook County nwere nicotine na ọnụego $ 0.20 kwa millilita
A $ 0.05 maka ụtụ milliliter na mmiri mmiri niile, ma ọ bụ na-enweghị nicotine
Taxtụ ụtụ 15% n'ahịa na e-mmiri mmiri na sistemụ sistemụ na-akwụ ụgwọ, yana $ 1.50 kwa otu ụtụ na prefilled pods na cartridges
43tụ ụtụ isi 43% na ngwaahịa niile
Enweghị ụtụ isi steeti niile na Maryland, mana otu mpaghara nwere ụtụ isi:
Montgomery County na-eweta ụtụ ụtụ 30% na ngwaahịa ahịa niile, gụnyere ngwaọrụ ndị rere na-enweghị mmiri mmiri
Taxtụ ụtụ 75% na ahịa ahịa niile na ngwaahịa niile. Iwu ahụ chọrọ ndị na-eri ihe ka ha gosipụta na a na-atụ ụtụ ngwaahịa ha, ma ọ bụ na ha nwere ike ijide na ịkwụ ụgwọ nke $ 5,000 maka mmejọ mbụ, yana $ 25,000 maka mmejọ ndị ọzọ.
Na 2011 Minnesota ghọrọ steeti izizi ịtụ ụtụ na e-ese anwụrụ. Taxtụ ahụ bụbu 70% nke ọnụ ahịa ahịa ahịa, mana abawanye na 2013 ruo 95% nke ngwaahịa na ngwaahịa ọ bụla nwere nicotine. A na-atụ ụtụ Cigalikes na pod vapes-ọbụnadị ngwa ngwa nke na-agụnye kalama e-mmiri ka a na-atụ ụtụ na 95% nke ọnụ ahịa ahịa ha niile, mana naanị na mmiri ọgwụ sị nikotin n'onwe ya ka a na-atụ ụtụ.
Ego 30% n'ahịa n'ahịa niile
Taxtụ ụtụ isi 8% na ngwaahịa mepere emepe, yana $ 0.30 kwa mililita na ngwaahịa ndị mechiri emechi (pọd, cartridges, cigalikes)
New Jersey na-atụ ụtụ mmiri e-mmiri na $ 0.10 kwa milliliter na ngwaahịa ndị dị na pod na katrij, 10% nke ọnụahịa mkpọsa maka mmiri mmiri e-efere, na 30% n'ahịa maka ngwaọrụ. Ndị omebe iwu New Jersey mere ntuli aka na Jenụwarị 2020 iji mee ka ụtụ isi e-mmiri abụọ nwere okpukpu abụọ, mana gọvanọ Phil Murphy kagburu iwu ọhụrụ ahụ.
New Mexico nwere ụtụ isi e-mmiri abụọ: 12.5% ​​N'ogbe na mmiri mmiri, na $ 0.50 na pọd ọ bụla, katrij, ma ọ bụ sịga nwere ikike n'okpuru 5 milliliters
Taxtụ ụtụ isi nke 20% na ngwaahịa niile
Ugwu North Carolina
Tụ $ 0.10 maka mililita na e-mmiri nwere nicotine
Eleghị anya ụtụ vape a kacha mara amara na mba a bụ ụtụ isi ụtụ%% nke Pennsylvania nke 40%. A na-enyocha ya na ngwaahịa ngwaahịa alụlụ niile, mana ụlọ ikpe kpebiri na 2018 na enwere ike itinye ụtụ ahụ na mmiri mmiri na ngwaọrụ gụnyere e-mmiri. Taxtụ ụtụ PA na-akwụsị karịa 100 obere azụmaahịa na steeti n'ime afọ mbụ mgbe akwadochara ya
Tụ $ 0,05 kwa millilita na mmiri mmiri na $ 3.00 kwa ụtụ isi n'otu e-ese siga
Ego ụtụ 56% na-akwụ ụgwọ na e-mmiri na ngwaọrụ emejupụtara
A 92% N'ogbe tax na e-mmiri mmiri na ngwaọrụ-kasị elu tax amanye site na steeti ọ bụla
$ 0,066 kwa ụtụ mililita na e-mmiri nwere nicotine
Ala ahụ gafere ụtụ isi e-mmiri abụọ nwere okpukpu abụọ na 2019. Ọ na-ebo ndị na-azụ ahịa $ 0.27 kwa mililita na e-ihe ọ juiceụ —ụ na ma ọ bụ na-enweghị nicotine-na pọd na cartridges ndị na-erughị 5 mL nha, na $ 0.09 kwa millilita na mmiri dị na arịa. buru ibu karịa 5 mL
A $ 0.075 kwa ụtụ milliliter na mmiri mmiri niile, ma ọ bụ na-enweghị nicotine
A $ 0.05 kwa millilita ụtụ na e-mmiri mmiri na ngwaahịa ndị mechiri emechi (pọd, cartridges, cigalikes) naanị - nwere ma ọ bụ na-enweghị nicotine
Atụ ntinye ọnụahịa 15% na ngwaahịa niile
Vape ụtụ isi gburugburu ụwa
Dị ka ọ dị na United States, ndị omebe iwu gburugburu ụwa aghọtaghị ngwaahịa alụlụ. Ngwaahịa ọhụrụ ahụ dị ka ndị na-eme iwu na-atụ egwu ụtụ isi na-ese sịga (nke ha bụ n'ezie), yabụ mkpali ahụ ma ọ bụrụ na ọ ga-eweta nnukwu ụtụ isi ma nwee olile anya maka ihe kacha mma.
International vape ụtụ
A 10 leke ($ 0.091 US) kwa ụtụ mililita na e-mmiri nwere nicotine
20 manats ($ 11.60 US) kwa ụtụ isi liter (ihe dị ka $ 0.01 kwa mililita) na mmiri mmiri niile
Thetụ isi bụ 100% nke ego ụtụ ụtụ na mmiri e-nwere nicotine. Nke ahụ ruru 50% nke ọnụahịa mkpọsa. Ebumnuche nke ụtụ ahụ edoghị anya, ebe ọ bụ na e chere na amachibidoro vap na mba ahụ
Agbanyeghị na Kroeshia nwere ụtụ elektrọnik na akwụkwọ ndị a, ugbu a ka edobela ya efu
A 12 0.12 ($ 0.14 US) kwa ụtụ isi millilita na mmiri mmiri niile
Ndị omeiwu Denmark agafeela DKK 2.00 ($ 0.30 US) maka ụtụ isi millilita, nke ga-amalite na 2022. Ndị na-akwado ikupụ na mmerụ ahụ na-arụ ọrụ ịgbanwe iwu a
Na June 2020, Estonia kwụsịtụrụ ụtụ isi ya na e-mmiri mmiri ruo afọ abụọ. Mba ahụ etinyegoro € 0.20 ($ 0.23 US) kwa ụtụ mililita na mmiri mmiri niile
A 30 0.30 ($ 0.34 US) kwa ụtụ milliliter na mmiri mmiri niile
A 10 0.10 ($ 0.11 US) kwa ụtụ mililita na mmiri mmiri niile
HUF 20 ($ 0.07 US) kwa ụtụ isi millilita na mmiri mmiri niile
Taxtụ ụtụ Indonesian bụ 57% nke ọnụahịa mkpọsa, ọ dịkwa ka ọ bụ naanị maka e-mmiri nwere nicotine ("extracts and essences of taba" bụ okwu). Ndi ochichi obodo choro ka umu amaala ghara ise siga
Mgbe afọ nke ntaramahụhụ ndị na-eri ihe site na ụtụ isi nke mere ka okpukpu abụọ dị oke ọnụ dị ka ị smokingụ sịga, ndị omeiwu approvedtali kwadoro ụdị ụtụ isi ọhụrụ, nke dị ala na e-mmiri na mbubreyo 2018. taxtụ ọhụrụ bụ 80-90% dị ala karịa nke mbụ. Tụ isi a ruru € 0.08 ($ 0.09 US) kwa mililita maka mmiri ọgwụ ndị nwere nikotin, na 4 0.04 ($ 0.05 US) maka ngwaahịa nikotin efu. Maka ndị vapu nke whotali na-ahọrọ ịme mmiri nke onwe ha, PG, VG, na ekpomeekpo anaghị atụ ụtụ
Ngwaọrụ na mmiri mmiri nwere nikotin na-atụ ụtụ na ọnụego 200% nke uru CIF (ụgwọ, mkpuchi na ibu)
Agbanyeghi na ndi Kazakhstan nwere ugwo e-liquid na akwukwo, edebe ya ugbua na efu
Taxtụ ụtụ Kenya, nke etinyere na 2015, bụ 3,000 Kenyan shillings ($ 29.95 US) na ngwaọrụ, yana 2,000 ($ 19.97 US) na nkwụghachi ụgwọ. Thetụ isi na-eme ka vaping dị oke ọnụ karịa ị smokingụ sịga (ụtụ sịga bụ $ 0.50 kwa mkpọ) - ma eleghị anya ọ bụ ụtụ vape kachasị elu n'ụwa
1 Kyrgyzstani Som ($ 0.014 US) kwa ụtụ mililita na mmiri mmiri nwere nikotin
Taxtụ ụtụ Latvia na-adịghị ahụkebe na-eji ntọala abụọ iji gbakọọ excise na e-mmiri: e nwere € 0.01 ($ 0.01 US) kwa ụtụ milliliter, yana ụtụ isi ọzọ (€ 0.005 kwa milligram) na ịdị arọ nke nikotin eji
A 90 0.90 ($ 1.02 US) kwa ụtụ milliliter na mmiri mmiri niile
Macedonian Denar nke 0.2 ($ 0.0036 US) kwa ụtụ mililita na mmiri mmiri e-mmiri. Iwu ahụ nyere ohere na-abawanye mmụba na ọnụego ụtụ July 1 nke afọ ọ bụla site na 2020 ruo 2023
Pesos 10 Philippines ($ 0.20 US) na 10 milliliters (ma ọ bụ obere nke 10 mL) na ụtụ isi nke e-mmiri nwere nicotine (gụnyere ngwaahịa ndị e mejupụtara). N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, a na-akwụ ụgwọ ọ bụla karịrị 10 mL mana n'okpuru 20 mL (dịka ọmụmaatụ, 11 mL ma ọ bụ 19 mL) na ọnụego maka 20 mL, wee gabazie
Ihe 0.50 PLN ($ 0.13 US) kwa ụtụ milliliter na mmiri mmiri niile
A € 0.30 ($ 0.34 US) maka ụtụ mililita na e-mmiri nwere nicotine
0,52 Romania Leu ($ 0.12 US) maka ụtụ mililita na e-mmiri nwere nicotine. Enwere usoro nke enwere ike gbanwee ụtụ isi kwa afọ dabere na mmụba ọnụ ahịa ndị ahịa
A na-atụba ngwaahịa ndị nwere ike iwepụ (dị ka cigalikes) na 50 rubles ($ 0.81 US) kwa otu. A na-atụ ụtụ e-mmiri Nicotine na 13 rubles $ 0.21 US) kwa mililita
Thetụ ahụ bụ 100% nke ụtụ ụtụ ụtụ na e-mmiri na ngwaọrụ. Nke ahụ ruru 50% nke ọnụahịa mkpọsa.
Dinarị nke Serbian Dinar 4.32 ($ 0.41 US) na ụtụ isi mililita na mmiri mmiri niile
A € 0.18 ($ 0.20 US) kwa ụtụ mililita na mmiri mmiri nwere nicotine
Mba mbụ wetara ụtụ mba vape bụ Republic of Korea (ROK, nke a na-akpọkarị South Korea na West) -n’afọ 2011, n’otu afọ ahụ Minnesota malitere ịtụ ụtụ mmiri e-mmiri. Ugbu a mba nwere ụtụ isi anọ dị iche iche na mmiri elektrọnik, nke ọ bụla edepụtara maka ebumnuche mmefu (National Health Promotion Fund bụ otu). (Nke a yiri United States, ebe ebuputara ụtụ isi ụtaba sịga maka Mmemme Ahụike Ahụike Childrenmụaka). Taxestụ ụtụ e-mmiri dị na South Korea dị iche iche na-agbakwụnye onye na-eburu 1,799 merie ($ 1.60 US) kwa millilita, yana ụtụ ụtụ na ntufu cartridges na pọd na 24.2 meriri ($ 0.02 US) na cartridges 20.
Tụ isi abụọ krona kwa millilita ($ 0.22 US) na mmiri mmiri e-nikotin nwere nikotin
Kpoo Sịga, Epen, Okingụ Sịga Ọzọ, Newport E sịga, E Sịga ọnya Pack, E Liquid Alụlụụ Sịga,